Maungtintyin: ငြိမ်းချမ်းရေး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု …. သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ပါ
ငြိမ်းချမ်းရေး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု …. သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ပါ
နည်းပညာအရ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နယ်နိမိတ်မရှိတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုအတွင်းမှာ နေထိုင်နေပါတယ်။ အမှန်အာဖြင့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဇာတ်- ဘာသာရေးနဲ့ ပထ၀ီအနေအထားများရဲ့ အုဌ်တံတိုင်းများက ခွဲခြားထားတဲ့ အကန့်တစ်ခုအတွင်းမှာ အသက်ရှင်ရပ်တည်နေကြရပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ဖန်တီးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတစ်ခုကို ရရှိခြင်းအဖြစ် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကွဲမှုများကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ အသိပညာအခြေခံတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုယ် ထုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူကြပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစုအပုံများဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ ၀န်ပိနေသည်အားလျော်စွာ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ၀ိရောဓိတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အသိကင်းမဲ့တဲ့အဆင့်ဟာလည်းပဲ ကြီးထွားနေတယ် ဆိုတာကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တွေ့ရှိသိမြင်ရသလို - အကျွန်ုပ်တို့မှာ သတင်းအချက်အလက်များ စုပုံနေတဲ့ နှုန်းထားက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသိပညာများ တိုးတက်လာနေတာနဲ့ အချိုးအစားညီမျှမှု မရှိ- ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့- ပြီးတော့ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လောက်လောက်များ သိနားလည်ပါသလဲ?
လောကီအသိပညာများကို စုဆောင်းနေခြင်းက အသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာ (ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ) အလွန်အရေးပါတဲ့ အမျိုးအစားတစ်ခုအတွက် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ကို တားမြစ်ထားတဲ့ ကျုံးတစ်ခုလို ပြုမူနေပါတယ်။
ဓမ္မကို မသိနားမလည်မှုဟာ တစ်ဦးချင်းအလိုက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းကျပ်မှုများနဲ့ ရောစပ်နေပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံမှုအတွင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက်သဘောထားကွဲလွဲမှုကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ ယုံကြည်အားထားရတဲ့ အထောက်အကူစနစ်တစ်ခုလို မိသားစုဆိုင်ရာ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာထူးခြားတဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာများရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ တရားခံဖြစ်ပါတယ်။
ပို၍ပို၍ လူတွေဟာ ကြောက်လန့်မှု-အမုန်းတရားနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့် ပြုမူဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ ဒီဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးများဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဆက်ဆံရေးမှာဖြစ်စေ- လူမှုရေးတက်ကြွမှုမှာဖြစ်စေ ဘ၀ရဲ့နယ်ပယ်အားလုံးနီးပါးမှာ ပျံ့နှံဝင်ရောက်နေပါတယ်။
ရှည်လျားစွာကာလကတည်းက လူသားသတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့ အခြေခံဦးတည်ရည်မှန်ချက်ရရှိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အရာဟာ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပန်းတိုင် အောင်မြင်မှုဆီသို့ အိန္ဒိယ ဖီလိုဆိုဖီကျောင်းများအားလုံးက ဓမ္မကို ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ၀ိဇ္ဖာပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းကို ထောက်ခံအားပေးထားပါတယ်။
ဓမ္မကို မြင်ခြင်းဖြင့် မမြင်သေးတာကို မြင်လာပါတယ်။ မသိသေးတာကို သိလာပြီး သံသယအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မကို သိဖို့ အကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိ မမှန်ကန်တဲ့ဖော်ပြချက်များကို ခါချရပါမယ်။ မှားယွင်းတဲ့အတွေးများက ဖြစ်တဲ့အရာအတွက် အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။
ဒါဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ယုံကြည်မှုများအကြား ခြားနားမှုအားလုံးကို ပပျောက်သွားစေဖို့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ အဖြစ်အပျက်ဇာတ်ကြောင်းက ထင်ဟပ်ပြသလိုပဲ တန်ဖိုးများက ပတ်သက်ဆက်နွှယ်နေပါတယ်။
ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားတစ်ဦးဟာ Godavari မြစ်ရှိ ဘာသာရေးဆိုင်ရာရေထဲမှာ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့အညီရေနစ်ခြင်းကို ရယူပြီးတဲ့နောက် အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စိပ်ပုတီးကို စိပ်လျှက် မန္တာန်များကို ရွတ်ဆိုနေပါတယ်။ လမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါ သူဟာ လဲကျသေဆုံးနေတဲ့မြည်းတစ်ကောင်ကို တွေ့ပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့- စက်တပ်ယာဉ်တစ်ခုခုရဲ့ လတ်တလောအဖြစ်အပျက်ကြောင့် သေဆုံးပုံပေါ်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံများက အလွန်အမင်း အနှောင့်အယှက်ပေးလျှက် သူဟာ မှတ်ချက်ချပါတယ်။ “ ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ တိရစ္ဆာန်ကိုသတ်တဲ့သူဟာ ကျိန်းသေ ငရဲကို သွားလိမ့်မယ်။” ဒါကို သူ ဆဲရေးတိုင်းထွာနေစဉ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ သူ့နောက်က ပေါ်လာပြီး သူ့ပခုံးပေါ်ကို အသာအယာပုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားကို သတင်းပေးပါတယ်။ “သင့်ရဲ့ သားအရင်းက မြည်းကို သတ်ခဲ့ပါတယ်။”
ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားက ပြန်ပြောပါတယ်။ “ တကယ်တော့ တိရစ္ဆာန်ကို ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းရဲ့ ကွင်းဆက်ဖြစ်ရပ်မှ တာဝန်ရပ်စဲပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လွယ်ကူချောမွေ့စေတဲ့သူဟာ ကျိန်းသေကောင်းကင်ဘုံသို့ သွားပါလိမ့်မယ်။”
ဓမ္မကို ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာဖွေခြင်းဟာ ကောင်းကင်မှာ ငှက်ရဲ့ခြေရာကို ရှာဖွေသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မကို ရှာဖွေဖို့ဖြစ်စဉ်များဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုနဲ့ မဆုတ်မနစ်တဲ့လုံ့လတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး - ဘ၀ရဲ့အကျွပ်န်ုပ်တို့ပန်းတိုင်ဟာ ပျော်ရွှင်ခြင်း-ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ အတိသုခတို့ ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒုတိယ - အပြုအမူတိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အပေါ်မှာ ပုံရိပ်ထင်ဖို့ - အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စကားလုံးများက အခြားသူများနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖွင့်ထား, ၀တ်ဆင်ထားတော့မယ်ဆိုတာကို ထင်ဟပ်ပြဖို့ - အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သူတို့အပေါ်မှာ အကောင်းအဆိုး ခံစားချက်များကို ကူညီနိုင်ပါသလား? ဆိုတာကို - အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နံနက်နဲ့ည နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ၁၅-မိနစ် အခွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တတိယ - အကျွုနိုပ်တို့ဟာ အခြားရောင်းရင်းအပေါင်းအသင်းလူသားများအပေါ်မှာ တယုတယခင်မင် ကြင်နာမှု အကျိုးသက်ရောက်တဲ့နည်းလမ်းကို ထင်ဟပ်တုန့်ပြန့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထ - အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အမှန်တရားကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံဖို့နဲ့နားထောင်ကြားနာဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ယဉ်ပါးသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဒါမှမဟုတ် နေ့စဉ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုသည်သာလျင် အကျွနုပ်တို့ကို အမှန်တရားဆီသို့ ယူနိုင်ပါတယ်။
Heraclitus ရဲ့စကားကို ကိုးကားခြင်းဖြင့် အကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကို နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။
“ လူတစ်ယောက်ဟာ ရွှေကို မက်မောတောင့်တလိုချင်လျင် သူဟာ အဲဒီအရာကို တူးဖော်ယူရပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကောက်ရိုးနဲ့ တင်းတိမ်ကျေနပ်ရပါ့မယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ပုလဲလုံးကို လိုချင်လျင် ပင်လယ်ထဲသို့ နက်စွာ ငုပ်လျိုရပါ့မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ယင် ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရှိ ကျောက်စရစ်ခဲများနဲ့ ရောင့်ရဲကျေနပ်ရပါ့မယ်။”
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီနောင်ရင်းချာပမာ လူသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးနားလည်မှုကို အဓွန့်ရှည်ကြာအောင် ပြုလုပ်ချင်သလား? ဒါမှမဟုတ် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပဋိပက္ခတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်အောင် ပြုလုပ်ချင်သလား? - ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Saturday, December 11, 2010